မဲခေါင်မြစ်ကူး ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ ပုံတူ – zlkontempo
မဲခေါင်မြစ်ကူး ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ ပုံတူ
Posted on September 27, 2020 | by zlkontempo
အိမ်ရှေ့ခြံထောင့် ကြောင်မကြီးယို့မိရာကိုမြှုပ်ထားတဲ့နေရာဟာ ဘာမှမပေါက်ပဲပြောင်သလင်းခါမြေကွက်။ မြက်တောင်မပေါက်ဘူး။ ကင်ဆာလို့ပဲထင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မနက်၎နာရီလောက်မှာမာန်ကြီးကြီးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်။ “ငါမသေရဘူး။ ငါမသေရသေးဘူးဟဲ့”လို့များလား သူ့ရာဇမာန်ကြီးခဲ့ပုံ။ မာဂရိ(သ်) ဒျူရာ့စ်ရဲ့ The Lover ‘ချစ်သူရည်းစား’ ဝတ္ထုထဲမှာ ၁၅နှစ်ခွဲအရွယ်ပြင်သစ်မိန်မးပျိုလေးဟာ မဲခေါင်မြစ်ကူးသင်္ဘောကုန်းပတ်ပေါ်ကနေ ဆိုင်ဂေါန်မြိ့တော်ဆိပ်ကမ်းမှာ ဇိမ်ခံကားနက်ကြီးထဲစောင့်နေတဲ့ သူမရဲ့ ၂၇နှစ်အရွယ် တရုတ်-ဗီယက်နမ်သူဌေးသားရည်းစားကို ရင်တခုံခုံနဲ့မျှော်လင့်ရင်းပါလာတယ်။ ရုပ်ရှင်လည်းရိုက်တယ်။ ဒျူရာ့စ်က ဒါရိုက်တာနဲ့စကားများပြီး သူ့မူလဝတ္ထုကိုပြင်ရေးလိုက်တယ် ‘The North China Lover’ ။ သူ့ဝတ္ထုတွေဟာ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိတွေလို့ပြောတယ်။ “ကျွန်မဝတ္ထုတွေထဲမှာ ကျွန်မ ဘာတစ်ခုမှမလိမ်ခဲ့ဘူး။ ယောင်္ကျားတွေကိုတော့ကျွန်မလိမ်တယ်။ ဘဝကိုတော့မလိမ်ဘူး”။
ယို့မိရာဟာတစ်သက်လုံးအပျိုမကြီးပဲ။ သားအိမ်ထုတ်ထားလို့။ သူနဲ့လာလာကစားတဲ့ကြောင်ထီးကြီးတစ်ကောင်တော့ရှိတယ်။ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ကိုယ်ချင်းပူးကပ် အမြီးချင်းလိမ်ယှက် လုံးပြီးလှိမ့်နေကြတာ။ နောက်တော့လည်း အထီးကောင်ကြီးဟာတစ်ခုခုသိသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ မလာတော့ဘူး။ သူမ ရည်းစားနဲ့အတူနေခဲ့တုန်းက သူမရည်းစားချွတ်ပေးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ရှင်မီးအနွမ်းလေးကို သူမ ထုတ်ယူနမ်းရှုံ့မိတိုင်း ဝေ့တက်လာတဲ့ ရင်ထဲကလှိုင်းလုံးကြီး။
ဒီကဗျာလေး (ကဗျာ လို့ကျနော့်သတ်မှတ်ချက်) ရေးအပြီးမှာ အကြောင်းအရာ content ထက် အာဘော် theme တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ သေခြင်းတရားနဲ့ ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ (တမင်လုပ်ယူတဲ့) ပြောင်းလဲခြင်းအပြင် ဆင်ခြင်ယုတ္တိနဲ့နားမလည်နိုင်တာတွေ၊ ထုတ်နှုတ်အနက်ကောက်မှုမပြုနိုင်တာတွေ။ ပြီး အဲဒီအာဘော်တွေ၊အနက်ဖော်/အနက်ကောက်မှုနဲ့အတူရရှိတဲ့အာရုံတွေ၊ အာရုံခံစားမှုတွေ၊ ခံစားမှုတွေ။ ဝိုးတဝါးရောယှက်။ မြစ်ကူးခြင်းဟာလည်း ဘဝရဲ့မက်တဖာတစ်ခုပဲ။ ဆိုတော့၊ အဲဒီအာရုံတွေဟာ ပုံတူမှာဆို ဘယ်လိုပေါ်မလဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူသလို တစ်ယောက်တည်းမှာတင် တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန် တစ်ထစ်ချမတူနိုင်တာ။ အဲဒါရဲ့ပုံတူ။ ဒီနေရာမှာ ‘ပုံတူ’ ကိုယ်၌က မက်တဖာဖြစ်နေတာ။
အဲဒါနဲ့ ဘာရဲ့ပုံတူ ညာရဲ့ပုံတူ ခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီးဆက်တိုက်ရေးလာခဲ့တာတွေ။ ကံကောင်းရင် ကဗျာစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပေါ့… ‘အာရုံရဲ့ပုံတူအချို့’. ..
The Dry Salvages ကျောက်ဆောင်တန်းများ (အပိုင်း ၅)
ကဗျာအကြောင်း ﻿ပြောပါတယ် (၅၈)